Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ (360-70-3) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Nandrolone ntụ ntụ Usoro / Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ
SKU: 360-70-3. Categories: Nandrolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C28H44O3
Ọbara arọ: 428.65
agba: White ka ìhè odo crystalline ntụ ntụ
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) uzuzu eji eme ihe na steroid
Raw DECA ntụ ntụ Aha
Nandrolone Mkpụrụ ntụ ntụ / DECA ntụ ntụ makwaara dịka DECA ntụ ntụ ntụ, Durabol, DECA ntụ ntụ.
DECA raw ntụ ntụ, bụ ma eleghị anya, nke abụọ-kasị mara amara a na-akpọ anabolic steroid mgbe testosterone. O yiri ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọ bụla steroid novice na ọtụtụ ndị na-ahụ maka steroid cycles kwenyere na maka nsonaazụ kacha mma ha nwere ike ịgụnye DECA ntụ ntụ. Otú ọ dị, n'eziokwu, onyinye a enweghi ihe anabolic pụrụ iche: ndị ọzọ steroid nwere ike ime ihe ọ bụla maka uto uru nke DECA nwere ike.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ Usage
Maka ụmụ nwanyị, 50-100mg kwa izu ka akwadoro, maka ụmụ nwoke, a na-akwado 100-200mg kwa izu.
Ọzọkwa, ebe ndị egwuregwu na-enwe nsogbu, n'ọtụtụ ọnọdụ iji DECA ntụ ntụ na steroid steroid nwere mmetụta dị mma nke inye enyemaka. Ọbụna doses dị ka 100 mg / izu nwere ike zuru oke maka nzube a n'ọtụtụ ọnọdụ.
Otu n'ime ndị kasị mma natara ụbụrụ anabolic na ahịa ruo n'oge; DECA raw ntụ ntụ Durabolin emewo aha maka onwe ya. N'ịkwado nnukwu DECA powdernoate ester, DECA ntụ ntụ Durabolin bụ nke Nandrolone steroid hormon. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-achọ iji meziwanye ọrụ ha. Na-enye uru dị oke egwu n'oge oge okirikiri, a na-akwado ya n'akụkụ ụfọdụ maka uru bara uru. Na ọtụtụ afọ nke arụmụka nke anabolic steroid, mmetụta ọjọọ nke DECA ntụ ntụ Durabolin ejirila ụjọ na nchegbu banyere ihe ndị dị ka 'ọnụ ọchị.' Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi njikọ ya na testosterone na-enwe mmekọahụ ma dịgasị iche iche na-ezighị ezi nke dị gburugburu ihe ọ nwere ike ime.
Nandrolone (ihe dị na steroid nke na-eme DECA ntụ ntụ ntụ Durabolin) pụtara na 1960 n'ebumnuche maka iji azụmahịa. Tinye n'okpuru aha ahia aha DECA raw ntụ ntụ Durabolin, ọ gafeela ọtụtụ nsụgharị na oge ọhụrụ na oge. N'agbanyeghị nke a, DECA ntụ ntụ Durabolin nọgidere na-abụ aha a maara nke ọma maka ọgwụ ahụ n'ebe ahụ. N'ihi ịtụ ụjọ banyere ihe ọ pụrụ ime, US nwere oke ohere iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. N'agbanyeghị nke ahụ, DECA ntụ ntụ Durabolin na-anọgide ruo taa bụ usoro ọgwụgwọ a ma ama nke a hụrụ n'anya maka ọtụtụ ihe ọ pụrụ inye aka.
Ịdọ aka ná ntị na Nandrolone Nkọcha ntụ ntụ
Ndị inyom kwesịrị ịpụta ihe ịrịba ama nke ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ịlụ, dịka ịmalite ịmalite olu, ihe otutu, ọnọdụ ndị na-adịghị ọcha. N'oge ihe akaebe nke virilism dị nwayọọ, iji gbochie ịmịnyeghị nsogbu, ịmalite ịgwụ ọgwụgwọ dị mkpa.
DECA ntụ ntụ Durabolin ojiji a na-ejikarị enwe mmetụta dị njọ nke na-egbochi imeghasị mmepụta nke testosterone na-emepụta mgbe usoro steroid gasịrị. Akuku mmetụta na-egbu egbu na libido na / ma ọ bụ ọrụ erectile na-adịkarị, kama ọ bụ nanị mgbe usoro ọgwụgwọ dịkarịa ala 200-400 mg / izu maọbụ mgbe a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe nanị na oke ọ bụla dị irè. Nsogbu dị njọ karị mgbe DECA na-enweghị ntụpọ na testosterone ma ọ bụ ọtụtụ doses nke ihe ndị ọzọ etrogenic dị ka trenbolone, Masteron, ma ọ bụ Dianabol. E nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche na nzaghachi maka mmetụta dị na libido na ọrụ erectile. Mmetụta nke ọnọdụ nwekwara ike.
Raw Nandrolone Nkọcha ntụ ntụ ntụziaka ndị ọzọ
Nandrolone Nandrolone Decanoate (DECA) nkedo ngwakọta bụ naanị ojiji maka intramuscular ogwu, ọkacha mma n'ime ahụ ike. Ojiji a ga-adabere na nzaghachi ọgwụ na nlebara anya n'ihe ize ndụ ahụ. Nandrolone Mkpụrụ ntụ ntụ ntụ / DECA kwesiri ka ewere ya dịka ọgwụgwọ na-edozi ahụ, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, ọgwụgwọ kwesịrị ịdị na-agafe.
Ihe omumu nke DECA ntụ ntụ Durabolin (nandrolone) bụ na onyinye a dị ntakịrị na njedebe ọjọọ na akpụkpọ ahụ na akpụkpọ ahụ. Nke a bụ n'ihi na 5-alpha reductase enzyme na-eme iji belata ike nke nandrolone, ebe ọ bụ na enzyme a dị iche na nke ndị ọzọ na-arịa ọrịa anabolic, enwere ike ịmụba testosterone.
Raw DECA ntụ ntụ ntụ ntụ
Obere ihe karịrị testosterone kwesịrị ekwesị, DECA ntụ ntụ Durabolin raw ntụ ntụ nwere ọkwa dị elu nke anabolic. N'agbanyeghị nke a, mkpokọta androgenic zuru ezu nke DECA raw ntụ ntụ Durabolin bụ nanị 37 (testosterone bụ 100.) Mbelata na DHN ma ọ bụ dihydronandrolone, DECA raw ntụ ntụ Durabolin na-emegharị nwayọ ma dị mfe ịghara ikwe ọgwụ ndị anabolic n'ebe ahụ. Ọ ghaghị inwe ihe ịga nke ọma na arụ ọrụ nke estrogenic dị ala. Ọ bụ ezie na DECA ntụ ntụ Durabolin nwere ike aromatize na ọbara, ọ na-eme na a whopping 20% tụnyere testosterone. Mara na n'agbanyeghị nke a, ị ka nwere ike ịmara ihe gbasara progesin.
Raw DECA ntụpụ ahịa
Esi esi zụta Nandrolone Decanoate ntụ ntụ; zụta DECA ntụpụ si AASraw
AASraw na-enye 99% Nandrolone Decanoate / DECA ntụ ntụ ntụba n'ahụ ndị na-arụ ọrụ ozu ma ọ bụ n'okpuruala larịị maka iji mezi emebi. .
10G DECA ntụ ntụ Powder Powder
12G DECA ntụ ntụ Powder Powder
Nandrolone Decanoate ntụ ntụ na Nandrolone phenylpropionate powde
2 reviews maka Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ
Nandrolone Decanoate (DECA) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma